Ireo rindranasa efatra tsara indrindra hampiasana amin'ny Android | Androidsis
Ny fampiharana tsara indrindra amin'ny fampiharana amin'ny Android
Krismasy dia fotoana be loatra amin'ny olona maro. Ny fivoriana tsy tapaka miaraka amin'ny namana sy fianakaviana ary fialan-tsasatra dia mahatonga ny maro hiala sasatra. Ka fotoana izao mihinana bebe kokoa isika ary mahazo kilao fanampiny. Soa ihany, ny telefaona Android antsika dia afaka manampy antsika hitazona fomba tsotra amin'ny fomba tsotra.
Manana fampiharana maro azo ampiasaina izahay. Amin'izany fomba izany, mijanona amin'ny endrika mety indrindra isika ary salama araka izay azo atao. Manimba antsika ny fanaovana ny daty be loatra toa ireny. Avelanay eto ambany miaraka amin'ny anay ianao fisafidianana ireo fampiharana fampiharana tsara indrindra amin'ny Android.
Rindrambaiko maromaro izay manampy anay afaka manao fanazaran-tena amin'ny fomba tsotra mivantana ao an-trano. Ka afaka manapa-kevitra foana isika hoe rahoviana vao manomboka manao fanatanjahan-tena. Ankoatry ny mahazo aina ary tsy mila mandany vola amin'ny gym na masinina ho an'ny tranontsika. Vonona ny hianatra momba ireo rindranasa ireo?
1 Fanatanjahan-tena an-trano
2 Fanamby ara-panatanjahantena 30 Andro
3 JEFIT Fanaraha-maso fanatanjahan-tena
4 Vodin-tsambo, abs ary ranjo
Ny anaran'ny fampiharana dia efa milaza amintsika ny zava-drehetra. A Android fampiharana izay manolotra andiana fanazaran-tena izay azontsika atao amin'ny fomba tsotra ao an-trano. Fanazaran-tena tsotra izy ireo ary tsy mila fitaovana, ka tsy mila mandany vola isika. Ao amin'ny fampiharana no ahitantsika karazana fanazaran-tena isan-karazany, ankoatr'izay, samy misy sary daholo. Azontsika atao tsara ny manao azy ireo.
Ho fanampin'izany, manana ny safidintsika isika mamorona fanao mahazatra ary araho ny lanjanay. Fampiharana tsara izay mamela antsika hanao fanazaran-tena amin'ny fomba tsotra. ny maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza izahay.
Fampiharana tena sarobidy io. Raha ny marina, Google taloha ela be dia nanome satroboninahitra azy ho fampiharana fampiharana tsara indrindra ho an'ny Android. Ny fanazaran-tena misy amin'ity fampiharana ity dia noforonin'ny mpanazatra matihanina. Hanampy antsika izy ireo manatsara ny fahasalamana sy ny fahasalamana. Ho fanampin'izay, ho afaka hahita fandrosoana miavaka isika amin'ny fampiasantsika azy. Izy io koa dia ahafahantsika mirakitra ny fizotran'ny fampiofanana ataonay.
Ny ANy rindranasa dia manana torolàlana horonan-tsary manampy antsika hahazo ny fitondra-tànantsika. Ho fanampin'ny fanamby isan-karazany. Fampiharana feno azonao atao misintona maimaimpoana amin'ny fitaovana Android. Ao anatiny no ahitantsika ny fividianana hanaingoana fiasa sasany.
JEFIT Fanaraha-maso fanatanjahan-tena
Ity fampiharana ity dia mihetsika tahaka ny mpanazatra manokana. Manana a tahiry goavambe goavambe misy fampiharana maherin'ny 1.300 inona no azontsika atao. Ho fanampin'izay, manana sary mihetsika izay mampiseho antsika ny fomba fanaovana azy. Ny fampiharana dia hanoratra ny fanazaran-tena sy ny fivoarantsika amin'ny fotoana rehetra. Afaka manao izany koa isika mamorona ny fanaonay manokana ary manara-maso misaotra ireo statistika marobe hita ao.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia eo aza izany dia mahita fividianana entana izahay ao anaty mba hamaha ireo fiasa fanampiny misy ao.
JEFIT Workout Tracker, Fanesorana lanja, App Gym
Vodin-tsambo, abs ary ranjo
Ny anaran'ny fampiharana dia milaza amintsika izay faritra amin'ny vatana ifantohany indrindra. Saingy, tsy maintsy lazaina fa fampiharana feno tokoa io. Manana fanazaran-tena mihoatra ny 30 isika ao. Ny zavatra tsara indrindra dia izy rehetra manana horonan-tsary avo lenta manazava amintsika ireo fanazaran-tena. Ho fanampin'ny fananana lahatsoratra sy sary. Manome antsika ny fampiharana fomba fampiasana efatra hafa: mpampiofana manokana, fanazaran-tena manokana, fanatanjahan-tena 4 minitra ary fanazaran-tena 7 minitra.
ihany koa azo atao ny mamorona fanazaran-tena ataonao. Safidio fotsiny izay tianao hatao sy ny faharetany. Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na izany aza, raha te hampiasa fiasa fanampiny tsy maintsy aloanao.
Developer: Sebastian steer
Ireto fampiharana efatra ireto no tsara indrindra azontsika ampiasaina amin'ny fomba tsotra avy any an-tranonay. Hita rehetra ao amin'ny Play Store daholo izy rehetra, mba hahafahanay manao ampidino amin'ny fitaovana Android amin'ny fiononana lehibe. Ahoana ny hevitrao momba ny fisian'ireo fampiharana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana tsara indrindra amin'ny fampiharana amin'ny Android
Mivoaka an-tsokosoko ao amin'ny TENAA, Sharp FS8018, eo anelanelan'ny laharana manaraka
Zarao amin'izay rehetra tianao ny lahatahiry Google Photos-nao